RW Kheyre oo xalay kormeeray Wadooyinka lagu furay amarka Mada... | Universal Somali TV
RW Kheyre oo xalay kormeeray Wadooyinka lagu furay amarka Madaxweyne Farmaajo.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay kormeer shaqo ku tagay degmooyinka Warta-nabadda, Hawlwadaag, Hodan, Deyniile iyo degmooyinka ku teetsan jidka warshadaha.
Khayre oo kormeerkiisa ay ku wehlinayeen Wasiirka amniga, Wasiirka Qorsheynta, Masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo saraakiil ciidan ayaa mid mid u xog wareystay dhammaan ciidankii ku sugnaa baraha kontorool ee uu tagay.
Mudane Khayre ayaa ujeedka kormeerkiisa wuxuu ahaa sidii u hubin lahaa in la furay wadooyinkii uu Madaxweynaha amray in la furo, maadaama dowladda ay tixgelisay cabashadii shacabka ee aheyd in wadooyinka loo furo.
Kormeerka Ra’iisul Wasaaraha oo gaaray xili dambe ayaa sababtay in dad shacab ah uu kula saxuurto maqaaxi ku taalla laamiga Maka Al-mukarama, taasi oo shacabka ay aad isugu yimaadaan, wuxuuna Ra’iisul Wasaaraha uu shacabka ka xog wareystay xaalada amni ee ay dareemayaan.
“Ra’iisul Wasaaraha goobihii uu booqday wuxuu kula kulmay ciidamada oo uu ku dhirageliyay in ay sii laba jibaaraan shaqada ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed, kormeerkan waa mid iska caadi ah oo Ra’iisul Wasaaraha uu sameeyo habeenada qaar, shacab badan ayuu magaalada kula saxuurtay.” Ayuu yiri Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed C/laahi Maxamed (Tuulax)
Kan-xigaBurlington: Gabar Somali ah oo dhaawa...
Kan-horeMareykanka oo shaaciyay Magaca askari...
40,804,948 unique visits